famoronana 5 hevitra Oct-27-2020
Wow, ry zalahy! fotoana fandefasana bobongolo vaovao !! Ha, jereo ny hafalian'ny zazavavy marketing!
Eny, talohan'ny nandefasana ity sary ity dia nisy olana iray sahirana tato am-poko. Namana iray nanana fifandraisana "linkIn" be dia be nanome ahy torohevitra tsara fanahy: Hey, harry! tsy tsara ny manasa tovovavy hijoro miaraka amin'ny bobongolo, indrindra amin'ny tarehy be mitsiky! Andao, ny famokarana bobongolo dia tokony ho tranga matotra, ok? Mety ho nety kokoa ve ilay tovolahy teknika mitazona caliper na taratasy fanaovana hosolo hisolo azy?
Nandritra izany fotoana izany, toa ny nambarany, malahelo aho fa manasarotra ny ekipanay, satria ny zavatra nataoko dia naneho fiheverana tsy misy dikany ho an'ireo mpamaky malalako. Toa ny mason'ny mpihaino no hany tanjon'ny famoahana ahy! Noho izany, tamin'ity indray mitoraka ity dia nikasa ny hanao araka ny natorony aho, ho ara-dalàna ho mpamorona lasitra "tena izy"! Avy eo, noraisiko tamim-pahamatorana ny fanampian'ny mpiara-miasa tamiko ny sary voalohany. toy ny sary etsy ambany aseho, ny bobongolo sy ny vokatra aseho eo alohan'ilay solomaso misy ahy ihany, ara-dalàna sy madio, tsara daholo. saingy mahatsapa zavatra very aho…
Rehefa vitako ny naka sary, ary mikasa ny hiverina. Hoy ny zazavavinay "taorian'ny 90": afaka mahazo sary miaraka amin'ity lasitra ity ve aho? Hoy aho, mazava ho azy! Avy eo izy dia manomboka manao sary «matihanina» isan-karazany amin'ny bobongolo, toy ny fanaovana selfie manokana, ary ny mpiasa hafa ao amin'ny atrikasa dia mihidy amin'ny fakan-tsary ao ambadiky ny fihomehezana, tampoka teo dia lasa mafana sy mirindra ny tontolon'ny atrikasa. Faly ireo mpikambana ao amin'ny ekipanay amin'ny zava-bitany, ary nisy fahatsapana ny zava-bita niseho tamin'ny endrik'izy ireo mitsiky…
Marina izany, ny fanaovana fitaovana dia tokony ho tranga matotra sy marina, fa ny fanaovana ny asa amin'ny toe-po falifaly dia mety manan-danja ihany koa ho an'ireo mpiasantsika. Araka ny fantatrao, rehefa tery ny fotoanan'ny tetikasa dia miasa matetika ny mpiasantsika, eny fa na dia mandritra ny alina aza mba hitazomana ny fotoana itarihana, dia mitazona ny fampanantenany ho an'ny mpanjifantsika. Reraka sy mihenjana izy ireo mandritra ny fizotrany, raha azo atao ny maneho ny fanajanay sy ny fankasitrahanay ny asany sy ny vokatra, maninona raha? Rehefa mamiratra amin'ny "sangan'asany" izy ireo, tsy tokony avelantsika izy ireo handre ny tehaka ataontsika? Mangatsiaka ny fitaovana, fa ny hafanana avy amin'ny ekipa!
Andro iray izao, be dia be ny tompona orinasa miasa no mitaraina: Vao mainka sarotra ny manangona mpiasa, tsy maninona ireo mpamorona, injeniera na fiasan'ny milina. indrindra ho an'ny vondrona "aorian'ny taona 90", toy ny ao an-tsainy, tsy misy fahafinaretana be loatra amin'ny indostrian'ny fanaovana bobongolo. Ny taranaka vaovao dia manana ny famaritana azy ireo momba ny asa, ny fahasambarana nanjary antony lehibe kokoa hananganana sy hanamafisana ny ekipa.
Ka ry mpamaky malala, mieritreritra ve ianao fa mametraka seho mahafinaritra amin'ny asantsika isan'andro, miala sasatra amin'ny ekipa rehefa ok na tsia ny fizotrany? azafady mba asehoy ny fihetsikao amin'ny fisafidianana sary eto ambany roa.